Halkaan ayaanu ku soo uruurinay warbixintii hey'adaha dawalda ka socda ee ku saabsan safarka lagu imanaayo ama lagaga baxaayo Iswiidhan.
Uppdaterades 26 nov 2021 13:55
Soo galitaanka Iswiidhan ee wadanka dibadiisa
Haddii aad muwaadin Iswiidhish ah tahay
Muwaadiniinta Iswidhishka ah, ayaa iyagu had iyo jeer leh xuquuqda ay Iswiidhan ugu soo safrayaan.
Waxay Hay'ada Caafimaadka Bulshadu soo jeedinaysaa in qofka ka soo safraaya waddan ka baxsan wadamada Waqooyiga Yurub (Norden) uu tijaabada PCR ka iska qaado marka uu Iswiidhan yimaado. Waxay taasi khuseysaa xitaa haddii aanad calaamado lahayn. Waxaanay talobixintu khuseynin carruurta lix jir ka yar ama dadka tallaalka laba toddobaad hortood wada dhameystay. Waxaanay taasi sidoo kale khuseynin qofka lixdii bilood ee la soo dhaafay uu ku dhacay/qaaday covid-19.
Dadka la tallaalay ee Iswiidhan u soo safraaya ayaa loo soo jeedinayaa inay is baaraan haddii ay calaamado covid-19 ah yeeshaan 14 maalmood gudahooda markay soo galeen ka dib.
Fiiro gaara! Waxay xeerarkani xitaa khuseeyaan muwaadiniinta ajnebiga ah ee Iswiidhan ka diiwaangashan, ama Iswiidhan degan oo haysta sharci deggenaasho oo shaqeynaaya, xuquuqda degganaanshaha ama meeqaam degganaanshaha haysta.
Haddii aad muwaadin ajnabi ah tahay oo aad wadamada Midowga Yurub/EEA ku dhex safrayso
Si Iswiidhan loogu soo galo ayaad u baahan tahay inaad ama tusto caddeyn tallaal, caddeyn tijaabo ama caddeyn inaad Covid-19 ka bogsatey. Shuruudani ma khuseyso haddii aad Finland, Danmark, Norway ama Island ka soo safrayso. Carruurta da'doodu 18 jir ka yar tahay ayaa ka reeban shuruudaha shahaadada tallaalka, shahaadada tijaabada iyo shahaadada muujinaysa in Covid-19 laga bogsaday.
Waxay tani shaqeynaysaa ilaa iyo taariikhda 31 Janaayo 2022.
Tijaabo covid-19 oo muujineysa inaan lagaa helinin waa inay 72 saacadood jir ahaato marka la soo galo.
Waxay Hay'ada Caafimaadka Bulshadu soo jeedinaysaa in qofka ka soo safraaya waddan ka baxsan wadamada Waqooyiga Yurub (Norden) uu tijaabada PCR ka iska qaado marka uu Iswiidhan yimaado. Waxay taasi khuseysaa xitaa haddii aanad calaamado lahayn. Waxaanay talobixintu khuseynin carruurta lix jir ka yar ama dadka tallaalka laba toddobaad ka hor wada dhameystay. Waxaanay taasi sidoo kale khuseynin qofka lixdii bilood ee la soo dhaafay uu ku dhacay/qaaday covid-19 ee ka bogsaday.
Carruurta da'doodu 18 jir ka yar tahay ayaa ka reeban shuruudaha caddeynta tallaalka, caddeynta tijaabada iyo caddeynta muujinaysa in Covid-19 laga bogsaday.
Ka akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan waxyaalaha khuseeya muwaadiniinta ajaanibka ah ee ka yimaada Midowga Yurub/EES ee bogga internetka ee Booliiska. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Haddii aad tahay muwaadin wadan kalae dhalashadiisa haysta oo aad ka soo safarayso dalal ka baxsan Midowga Yurub/EEA
Mamnuucid ayaa saaran safarada aan muhiimka aheyn ee Iswiidhan loogaga imanaayo wadamada Midowga Yurub/EES ka baxsan. Mamnuucidu waxay khuseysaa muwaadiniinta ajnabiga ah ee ka soo safraaya waddamada ka baxsan Midowga Yurub/EES. Dadka qaar qaba baahiyaha degdegga ah ama Iswiidhan ka qabanaaya hawlo lagama maarmaan ah ayaa laga dhaafi karaa mamnuucida.
Muwaadiniinta ajaanibka ah ee buuxinaaya shuruuda ka reebanaanta ayaa Iswiidhan u soo safri kara haddii ay tusi karaan warqad ugu badnaan 72 saacadood jir ah oo natiijada tijaabo muujinaysa inaan la qabin/negatif ah covid-19. Waa in musaafiriintaasi ay sidoo kale raacaan talooyinka Hay'ada Caafimaadka Bulshada ee ku saabsan inay tijaabo iskaga qaadaan sida ugu dhakhsaha badan ee ay awoodaan markay yimaadaan ka dib.
Dhowr waddan ayaa laga dhaafay mamnuucida soo gelitaanka. Waxa go'aaminayaa waa haddii lagu nool yahay mid ka mid ah wadamadaas, ee ma aha in dhalashadooda la sito. Dadka Iswiidhan u soo safraaya waa inay sidaa darteed u diyaar garoobaan inay cadeeyaan inay degan yihiin mid ka mid ah waddamadaa si loogu ogolaado inay soo galaan:
Wax dheeraad ah ka akhri kuwa ay yihiin wadamad ka reeban mamnuucida saaran soo gelitaanka ee wadamada ka baxsan Midowga Yurub/EES oo laga helaayo bogga internetka ee Booliiska iyo ka Xukuumada.
Cadeynta tallaalka ee dalalka Midowga Yurub/EES ka baxsan laga qaatey
Shahaadada tallaalka ee ka soo baxday mid ka mid ah dalalkan la tilmaamay ee ka baxsan Midowga Yurub/EES ayaa la isticmaali karaa marka Iswiidhan la soo gelaayo: Waxay shahaadada tallaalka khuseeya/shaqeynaaya inuu qofku tallaalka wada qaatey iyo inay 14 maalmood ka soo wareegeen markii dooska ugu danbeeya ee covid-19 la qaatey.
Waxa bogga internetka ee booliiska iyo ka xukuumada ku jira macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxyaalaha ka reeban mamnuucida soo gelitaanka ee wadamada ka baxsan Midowga Yurub/EES iyo wadamada shahaadada tallaalka loo isticmaali karo (boggagu waxay ku qoran yihiin af iswiidhish).
Is diyaarsi oo si wanaagsan warka ula soco
Ha safrin haddii aad calaamado leedahay.
Si wanaagsan warka ula soco. Xayiraado iyo xeerarka maxali ah ayaa jira kuwaas oo dhakhso iskugu bedeli kara. Waxa tusaale ahaan jiri karta shuruud ah in af saab la xirto iyo xeerarka khuseeya in masaafad la isku jirsado.
Ka taxadir dadka aad la kulmeyso todobaadka ugu dhow safarkaaga. Iska ilaali khaasatan inaad la kulanto dadka ka tirsan kooxaha khatarta ugu jira.
La soo deg barnaamijka/app-ka UD Resklar si aad u hesho macluumaad hadda jira oo ku saabsan halka aad u socoto. Waxay sidoo kale safaaradahu hayaan macluumaadka socdaalka ee xilligaas taagan ee ku jira Sweden Abroad. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Wasaarada Arimaha Dibadda ama hey'adaha ajaanibta ee Iswiidhan ma awoodi doonaan inay kaa caawiyaan xagga gaadiidka Iswiidhan loogu soo laabanaayo haddii ay kugu adkaato inaad dalka dib ugu soo laabato xaaladda jirta darteed. Waxay Wasaarada arrimaha dibadda leedahay lambar telefoon oo gaar ah oo loogu talogalay su'aalaha ku saabsan fayruska Korona iyo safrida. 08-405 92 00.
Wixii arimaha qunsuliyada qaabilsan ee degdega ah, wac waaxda gurmadka qunsuliyadaha ee Wasaaradda drimaha dibadda lambarka telefoonka ee: 08-405 50 05.
Linkiyadan soo socda waxay ku geynayaan bogagga af Iswiidhish ku
Macluumaadka safarka ee Wasaarada arimaha dibada waxa laga helayaa Boggaga internedka ee xukuumada.
Macluumaadka ku saabsan safarka diyaaradaha waxa uu ku jiraa bogga internetka ee Transportstyrelsen.
Wadamo kala duwan waxay dalbanayaan cadeymo kala duwan oo soo gelitaanka. Waa inaad sidaas darteed ka war haysaa waxa wadanka aad u safrayso khuseeya.
In shahaadada safarka la bixiyo ayaan kamid ahayn shaqada caadiga ah ee daryeelka caafimaadka. Hase yeeshee waxa jira goobo caafimaad oo bixinaya baaritaano loogu talogalay shahaadooyinka safarka.
Waxaad macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa wanaagsan in safarkaaga hortiis laga fikiro ka heli kartaa Boggaga internedka ee Folkhälsomyndigheten. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)